Power cut Alliance mila ny CPU mpampiantrano mba hanaraha-maso ny PSU, ary manampy sary - Infinity-Electronic
HomeNewsPower cut Alliance mila ny CPU mpampiantrano mba hanaraha-maso ny PSU, ary manampy sary
Ny Alliance (Artesyn Embedded Technologies, Bel Power Solutions, Flex, ary STMicroelectronics) dia namorona filaharana iombonana ho an'ny karazana 48Vdc-dc karazana miova ho an'ny karazana - antsoina hoe 'power stamps' (pitsipika eto) ary voalohany indrindra mikendry ny fitaovana IT sy ny fametrahana angon-drakitra misahana ny angon-drakitra amin'ny alàlan'ny famokarana herinaratra 48V, ny fametrahana ny FPGAs sy ny asics eo an-toerana, ohatra.
Ny modely vaovao, ny 'fitondrana fanaraha-maso'Dia ampiasaina amin'ny' mari-pamantarana satelita ', voafaritra mialoha. Ny tanjona dia ny hanomezana ny angon-drakitra rehetra, ny fanaraha-maso ary ny fitakiana ny fizarana herinaratra avy amin'ny Satellites, "izay ahafahana manatanteraka ny fifandimbiasam-pahefana tsy misy fangatahana ny fampiharana ny fampiantranoana", hoy ny fikambanana. "Tena tsara ho an'ny servery, fitehirizana ary fametrahana rafitra izay voafetra ny toerana manodidina ny processeur. Ny rafitra fampiantranoam-pahefana dia tsy maintsy manome ny alàlan'ny làlam-pitaovana 48V ho an'ny mari-pamantarana sy ny sata sata, izay manala ny filana ny teboka fototra sy faharoa. "
Tamin'izany fotoana izany ihany, ny Alliance dia nanambara ny birao iray ho an'ny processeurs mifototra amin'ny micro-architecture 10nm CPU an'ny 10nm manaraka - ny code-named Ice Lake.
Ny boaty hafa dia azo ampiasaina ho an'ny processeur VR13 (Skylake) an'ny Intel, ary ho an'ny asics sy FPGAs.
Misy koa ny interface graphique (GUI) izay azon'ny mpizara ampiasaina miaraka amin'ny vokatra avy amin'ny orinasa mpikambana, ary ny birao vaovao misy ny rafitra ASIC sy / na FPGA.
Ny mpikambana ao amin'ny Power Stamp Alliance dia manaiky ny dingana arahin'ny vokatra azo ampiasaina, ary ny asa atao ao anatin'izany, raha mifaninana tsy miankina amin'ny alàlan'ny fanavahana ny topolojia, ny rafitra ary ny fampisehoana.